Helmota ivelany, fiarovan-doha, fiarovan-doha amin'ny bisikileta, fiarovan-dohan'ny bisikileta - Vital
Fitaovana fanamboarana mandroso
Robot ABB 6-aixs, fitaovana Kurtz EPS ary toerana fanaovana andrana Cadex. Ireo loharanom-pahalalana mifangaro mijoro.
Miorina amin'ny famandrihana sy famokarana ara-potoana. FAI, SOP ary drafitra fanaraha-maso ny fizotrany hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra voalohany.
Ny vahaolana ho an'ny mpanjifa, tsy misy antenaina. Vahaolana famokarana fiarovan-doha kilasy tsara indrindra.
Matoky sy manana fanoloran-tena manokana R & D teay.
Smart signal frein automatique LED hazavana LED ...
Hevitra mandroso sy fanavaozana
Vonona ny hijery ny hevitra vaovao, ny endrika vaovao, ny fitaovana vaovao ary ny fizotrany. Tsy mieritreritra boaty, ezaka tsy misy reraka.
Fitaovana avo lenta sy laboratoara fitiliana tena
Misafidiana fitaovana fanamboarana fiarovan-doha kilasy tsara indrindra. Fitaovana fanandramana Cadex calibrated ampiasain'ny laboratoara laboratoara mahay dia afaka manao fitsapana an-trano mahazatra rehetra.
Ny traikefa 15 taona mahery
Fampivoarana sy fanamboarana fiarovan-doha hendry
Ataovy miavaka ny fiarovan-doha marani-tsaina amin'ny alàlan'ny LED sy APP tsy mitongilana. Tolotra fanodinana tolotra, Jiro ho an'ny freins, Bluetooth, GPS, fakan-tsary sns. mitarika fironana aroloha manan-tsaina miaraka amina fampiasa namboarina.
Mamaly sy mahomby
Fanaterana lafo sy mahomby
Ny ampahany rehetra amidinay dia voamarina
Azafady mba avelao ny hafatra ho anay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
“Tongava” ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina any Beijing
Raiso ny lalamby haingam-pandeha any Beijing Zhangjiakou hitsidika ny “tanàna vaovao misy ranomandry sy oram-panala” ny faritry ny fifaninanana Zhangjiakou dia hita ao amin'ny Distrikan'i Chongli, Tanànan'i Zhangjiakou, Faritanin'i Hebei. Ny tolakandron'ny 19, Ity no fiantsonan'ny lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha indrindra eto an-tany izay mandeha mivantana any amin'ny ...
Ahoana ny fampiasana bisikileta hampihenana ny tavy amin'ny fomba mahomby amin'ny ririnina?
Ny fomba fampiasana bisikileta hampihenana ny tavy amin'ny fomba mahomby dia ahiahy nandritra ny taona maro. Ny toetrandro mangatsiaka, indrindra indrindra, dia manampy fanamby bebe kokoa amin'ny fihenan'ny tavy. Amin'ireo fanatanjahantena mamoaka tavy rehetra, ny bisikileta hampihenana ny tavy no safidy tsara indrindra amin'ny fampihenana ny tavy amin'ny ririnina, satria misy fiatraikany kely amin'ny vatana izany, tsy ho mora ...
fampiroboroboana ny tsenan'ny ski any Shina
Ny Lalao Olaimpika Ririnina tamin'ny 2022 dia nandrisika ny fampandrosoana ny ririnina ririnina any Shina, miaraka amin'ireo toeram-pisakafoanana ski saika isaky ny faritanin'i Sina. Tamin'ny taona 2018 fotsiny, dia 39 ny trano fisakafoanana ski vao nisokatra, miaraka amin'ny totalin'ny 742. Ny ankamaroan'ny toeram-pialan-tsasatra dia mbola tsy dia manana fitaovana mazika afa-tsy iray ...